मुख्य प्रमाणीकरण योजनाहरु
व्यापार, विशेषज्ञ सोध्न
हरेक उत्पादन वा सेवा केही गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। मानव सुरक्षा मा एक प्रभाव हुन सक्छ जो ती सामान वा सेवाहरूमा, प्रमाणित हुनुपर्छ। तिनीहरूले एक विशेष सूचीमा समावेश छन्, समीक्षा गरिन्छ। प्रकार र मात्रा आधारमा उत्पादन, सामान र सेवाहरू को, साथै प्रमाणीकरण उद्देश्य यस प्रक्रिया को लागि धेरै योजनाहरु छन्। तिनीहरूलाई प्रत्येक कार्यहरू एक विशिष्ट सूची प्रतिनिधित्व गर्दछ। पक्कै, एक प्रमाणीकरण योजना को विकल्प यो उहाँबाट गुणस्तर को एकरूप को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न इच्छा emanates किनभने, निर्माता (वा आयातकर्ता) संग बातचीत। यो एक पक्ष, र सिरियल उत्पादन मा दिइएको गर्न सकिन्छ।
तल rassmtreny प्रमाणीकरण योजना। № 1 यो जटिल संरचना भएको उत्पादनहरु लागि प्रयोग गरिन्छ। यो उत्पादन एक सानो आवाजमा उत्पादनहरु लागि प्रयोग गरिन्छ। नमूना एक संवाददाता संकल्प भएको एउटा विशेष प्रयोगशाला परीक्षण गरिएको छ। को आवेदक परीक्षण उत्पादन को एक अतिरिक्त विश्लेषण प्राप्त गर्न खोज्ने भने, यो प्रस्तावित प्रमाणीकरण योजना 1a छ।
नम्बर2यो निरीक्षण गर्न प्रदान गरिएको छ। निर्मित उत्पादन परीक्षण को सुरुमा, जो पछि परीक्षण initiator दर्ता प्रमाणपत्र सुरु हुन सक्छ। निरीक्षण नियन्त्रण यसको कार्यान्वयन विभिन्न अंक मा उत्पादन को परीक्षण समावेश छ। यो परीक्षण मा ठाउँ लिन एक आधिकारिक प्रयोगशाला। माथिको प्रमाणीकरण योजना 2a पूरक प्रमाणपत्र को जारी नभएसम्म परीक्षण को उत्पादन को विश्लेषण समावेश जो एक सर्किट छ। यी विकल्पहरू दुवै नियमित रूपमा रूसी संघ को क्षेत्र मा आयात सामान लागि सिफारिश छन्। गुणस्तर स्तर कागजात अनुपालनको एक वर्षको लागि मान्य छ।
№ 3. परीक्षण संवाददाता संकल्प भएको एउटा विशेष प्रयोगशाला मा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रमाणपत्र जारी भएपछि, निरीक्षण नियन्त्रण बाहिर छ र उत्पादन उपभोक्ता सिधै जान्छ अघि प्रक्रिया गरिन्छ। उत्पादन प्रमाणीकरण योजना प्रकार 3A सँगै उत्पादन र निरीक्षण नियन्त्रण एक विश्लेषण संग, उत्पादनहरु को अनिवार्य परीक्षण समावेश। यी विकल्पहरू ती कागजात सबैभन्दा महंगा र सिफारिश सामान, उत्पादन, र मेल सेवा, गुणस्तर समय लामो अवधिको लागि परिवर्तन गर्दैन जो। प्रमाणपत्र3वर्ष को लागि मान्य छ।
№4टेस्ट अघिल्लो embodiments जस्तै, छन्, तर निरीक्षण नियन्त्रण अन्यथा गरिन्छ। नमूनाहरू मात्र निर्माताको गोदाम (वा आयातकर्ता) बाट लिइएको, तर पनि-साइट कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ। प्रमाणपत्र, उत्पादन अवस्था एक विश्लेषण को जारी गर्न योजना 4a मा।
№5उत्पादन, र मात्र होइन गोदाम, बिक्री सर्तहरू देखि परीक्षण नमूनाहरू मार्फत बाहिर छ, जो नियन्त्रण, को बाहिर यस मामला र नमूना परीक्षण नमूना र विश्लेषण मा, तर पनि माध्यम उत्पादन अवस्था र गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली स्थिरता को स्क्यान निरन्तरताले।
नम्बर6यो प्रमाणीकरण योजना को सार को कम्पनीको गुणस्तर प्रणाली, एक विशेष शरीर नियन्त्रण खेती छ।
नम्बर7यो परीक्षण ब्याच उत्पादन गर्छ। कागजातको असीमित वैधता, नियन्त्रण प्रदान गरिएको छैन।
नम्बर 8 यो योजना कम्पनी द्वारा निर्मित सबै उत्पादनहरु को अनिवार्य परीक्षण समावेश छ। प्रमाणपत्र सकारात्मक परिणाम घटनाको उपलब्ध छ।
त्यहाँ अन्य योजनाहरु छन् सेवाहरू, को प्रमाणीकरण को आफ्नो संख्या 9, 10 र 10a। तिनीहरूले उत्पादन को एक सानो राशि संग एक पार्टीको लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्को अवस्था - एक सम्झौता को अस्तित्व।
उत्पादन को एकाग्रता
अवधारणा, कार्य, नमूना व्यापार योजना। व्यापार योजना - यो छ ...
अनुकूलता: "Fluconazole" र रक्सी। यो मूल्य जोखिम छ?
बिक्री प्रशिक्षण - चाँडै बेच्न सिक्न
संचार को फारामहरू र आफ्नो विशेषताहरु
टिक टीएसी खुट्टाको औंलासम्म मा जीत कसरी? सादा र सरल योजना
अन्तरिक्ष यात्री को आहार
समीक्षा: "Eltatsin"। प्रयोगको लागि निर्देशन, दबाइ analogs को विवरण
पहाड खरानी: वर्णन, सम्पत्ति, वितरण को क्षेत्र। एक पहाड खरानी को जीवन
"कसरी Minecraft को एक सुन्दर घर निर्माण गर्न": विषय मा आधारभूत सुझावहरू
डायपर "Libero सुविधा": समीक्षा, प्रकार र संरचना
का ट्याब्लेट लागि एन्टी-भाइरस चयन गर्न प्रयास गरौं
होटल "Arans Resort" (टर्की / Alanya): एक शान्त छुट्टी सबैलाई किन्न सक्छन्
Varistor: काम सिद्धान्त, विशेषताहरु, जिम्मेवारी। कसरी varistor गर्छ?
पहुँच बिन्दु वाइफाइ घरमा रूपमा एक ल्यापटप
एक व्यक्ति चयन गर्न स्वतन्त्रता। छनौटको स्वतन्त्रता अधिकार